कोरोना त ठीक भयो, छिमेकीको पो डर छ ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना त ठीक भयो, छिमेकीको पो डर छ !
१३ असार, पोखरा । दुर्घटनामा परेर पोखरा मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत कुश्मा पर्वतका एक युवकमा कोरोना संक्रमण देखियो । कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री र संक्रमितको सम्पर्कमा नआएका ३५ वर्षीय ती युवकमा २२ जेठमा कोरोना देखिएपछि उनीमात्रै होइन, समाजमै सन्त्रास फैलियो ।
पर्वतबाट पोखरा आएको करिब एक हप्तापछि ती पुरुषमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो ।
संक्रमणको माध्यम नै नखुलेका युवकमा कोरोना देखिएपछि सुरुमा उनी, परिवार, आफन्त पनि खुबै डराए । तर शुक्रबार कोरोनालाई जितेर फूल, अबिरसहित मुस्कुराउँदै उनी घर फर्केका छन् ।
घर फर्किँदै गर्दा उनले अरुलाई पनि सन्देश दिँदै भने, ‘कोरोनासँग डराउनु पर्दैन । आत्मबल बढाए यसले केही गर्न सक्दैन । सजिलै जितिँदो रहेछ । यो सामान्य भाइरस हो ।’
छिमेकीको डर छ !
डाक्टरको साथ, हौसलाले कोरोना जितेर घर फर्किँदै गर्दा समाजको डर भने यथावत रहेको मादी गाउँपालिकाका एक पुरुषले बताए ।
‘हामीलाई निको पार्ने र हौसला बढाउने डाक्टर साबहरुलाई धन्यवाद छ,’ उनले भने, ‘अब छिमेकीबाट पो कस्तो ब्यवहार हुने हो ?’
उनीहरुले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यसँग घर फर्केर के–के गर्ने भनेर सोधिरहेका थिए । डा. आचार्यले एक हप्ता सुरक्षित भएर घर बस्न आग्रह गर्दै कोरोना जितेर फर्केकालाई छिमेकीले नराम्रो व्यवहार गर्नै नमिल्ने बताए ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा अरु १६ जना छन् । गण्डकी प्रदेशमा १ सय १ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन् ।
अहिलेसम्म ७ सय ९२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर पोखरामा उपचाररत २ जनाको ज्यान गएको छ ।